Marka aan guji badhanka badhanka waxba ma dhacaan, maxaad samaynaysaa?
Su'aalaha ku saabsan qalabka jilista, add-ons iyo Websaydh
Su'aalaha ku saabsan account
Waad sugeysaa laakiin waxba ma dhicin, faylka lama soo dejiyo, laga yaabee kadib dhowr daqiiqo oo sugitaan ah oo aad ku heshay fariin qalad ah nooca "Timeout Connection" ama "ERR_EMPTY_RESPONSE" ama fariimo kale sida kudhaca internetkaaga internetka.
Xaqiiq ahaan, downloads ka Rikoooo waxaa laga diraa server kale oo ku yaal dekedda 8888 (ex http://download.rikoooo.com:8888) taas oo ah xasilooni wanaagsan oo gaar ah sida gaar ahaan faylasha dhowr Gigabytes.
Dhibaatadu waxay tahay in dukumiintiga router (hore Livebox, Freebox, Neufbox) ee isticmaalayaasha qaarkood loo qaabeeyey inay diidaan dekadda 8888 (iyo sidoo kale dekadda 8080), si aad u ogaato haddii aad ku jirto xaaladdan, tag Simviation.com iyo feyl wixii faylal ah oo aan kala sooc lahayn, haddii soo-qabashada aan la bilaabin (sida Rikoooo), ka dibna waxaad ka mid tahay boqolkiiba inta yar ee isticmaala kuwaas oo router ka xaddidan 8888 (iyo 8080 loogu talagalay Simviation). Dukumiintiyadan waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa shabakadda webka, streaming, iyo HTTP, sidaa daraadeed, waa ammaan in la furo.
Waa inaad ku xirto router-gaaga (hore Livebox) oo ku dar qawaan furan oo u furaya dekada 8888 TCP / UDP.
Halkan waxaa ku xiri doona qodobbo ku qoran Ingiriis oo sharaxaya sida loo furo dekadahaaga, ha ka waaban inaad sameysid cilmi-baaris aad ku samayso Google adoo adeegsanaya magaca adeeg bixiyahaaga internetka sida ereyga muhiimka ah.
La xiriirka fiidiyowga Youtube daraasad fara badan (ku darso bixiyaha adeegga internetka sida ereyga muhiimka ah)
on Saturday March 03 by rikoooo